Imboni yezingcingo yenza izithombe eziluthayo | Isisekelo Somvuzo
Ikhaya The Law Imboni yezocansi
Imboni yezocansi ibuyisela emhlabeni wonke amashumi ezinkulungwane zamaRandi ngonyaka. Kulukhuni ukubeka isibalo esicacile kuso ngoba azikho izifundo ezinokwethenjelwa zamuva, kodwa imboni enkulu. Iningi le-porn e-intanethi lenziwa endaweni engalawulwa. Ngokuvamile kubonisa imisebenzi engaba yingozi empilweni. Isibonelo kukhona ukusetshenziswa okukhulu "kokungaboni," okungukuthi, ubulili obudala ngaphandle kwekhondomu. I-HIV isesinye sezifo ezibulalayo kakhulu emhlabeni, usethe inombolo ye-2 ohlwini lwezifo ezithathelwanayo yi-World Health Organization. Ku-2014 kwabulala abantu abayizigidi ezingu-1.4.
Izithombe eziningi zobulili ezingcolile zobulili obuhlukile zithinta ubulili obubi kakhulu, obudlova nokucindezela. Ivame ukuqukethe izigcawu zokudlwengula kwangempela noma okufanisiwe futhi ngezinye izikhathi kubonisa ukudlwengula. Lezi zigcawu ezishaqisayo zihlola ukubonakala okujulile ebuchosheni. Izithombe ezibonwe ngaphambili azikwazi ukubonakala. Izinto ezinjalo akulula ukuthola. Kucindezeleka ngokukhethekile kubantu abasha abaye babika ngezingosi zokutakula ukuthi lezi zithombe zingabangela isikhathi eside, ama-flashbacks ama-flashlight.
Ukuthakazelisa kokubuka izinto ezethusayo kubangela ukuba i-dopamine ikhulise ukubenza bafune ukubuyela kaningi. Lokhu kususa ubuchopho ngokuhamba kwesikhathi futhi kungaholela ekucindezelweni ngokomzwelo. Ukucwaninga kubonisa ukuthi intsha ebuka amazinga aphezulu we-porn ye-intanethi isabela ngendlela ephansi ekuhlukumezeni emigwaqweni futhi ayifuni ukungenelela.
Umthetho oyisisekelo wezomnotho wukuthi lapho kunesidingo khona, kuzoba khona ukunikezwa. Ukulutha kwezilwane ezingcolile ze-intanethi kusho ukuthi isifiso se-pornography ye-intanethi sizoqhubeka sanda. Njengoba nje izidakamizwa ezidakamizwa zidinga izinto eziningi ukuze zithole ama-hit, kanjalo nezilonda ezingcolile zidinga intsha eyengeziwe, ukuqina nokuhlukahluka kwezinto ezibonakalayo ukuze zilungiswe futhi zigweme ukuwa kwezinto ezimbi kusukela ekuhoxisweni kokugqugquzela. Njengoba ukubekezelelana kwezinga elilodwa lezinto ezingasenzi lutho, ukufunwa kwezinto ezivusa amadlingozi kuzoqhubeka futhi. Imbonini yezocansi ijabule kakhulu ukuyihlinzeka.
Landa ividiyo mayelana nokuthi imboni yezocansi isebenza kanjani.
<< Ukwanda Kobugebengu Ucansi lweWebcam >>